Ikhaya leHolide laseSan Giacomo - I-Airbnb
Ikhaya leHolide laseSan Giacomo
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguNunzia
I-92% yeendwendwe zakutshanje inike uNunzia iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Igumbi lokuhlala elipholileyo kunye nekhitshi elixhotyiswe kakuhle liyenza ibe yeyona ndawo ifanelekileyo kwabo bafuna ukuziva besekhaya. Igumbi lokulala eliphindwe kabini linegumbi lokuhlambela labucala ngaphakathi. Igumbi lokulala lesibini likwaxhotyiswe ngeebhedi ezimbini zomntu omnye kunye nenye ibhedi eyongezelelweyo. Indawo yangaphandle ibandakanya i-terrace enombono we-panoramic weValle Santa, ilungele umzuzu wokuphumla ekutshoneni kwelanga.
Ikhowudi ye-CIR-ID 5880
Indlu enesango elizimeleyo ibekwe kumgangatho ophantsi wendlu yosapho. Ikhululekile kwaye izolile, ziimitha ezilikhulu kuphela ukusuka ekungeneni kwiziko lembali lelali kunye ne-200 ukusuka kwiMonastrery yaseSan Giacomo. Ijikelezwe yindalo inika umbono wepanoramic oya kuhlala entliziyweni yakho.
Kwi-850 yeemitha ukuphakama iPoggio Bustone ijonge kwiNtlambo yaseSan Francesco kunye namachibi ayo kunye nokugcinwa kwayo kwendalo. Indawo yokuhlala ikumgama omfutshane ukusuka kwiibhari, iivenkile, iposi kunye nekhemesti. Umgama nje oziimitha ezili-100 kumnyango wokungena kumbindi wembali wedolophu enenqaba yayo kunye necawe encanyathiselwe. Amanyathelo ambalwa ukusuka kwiMonastery yaseSan Gicomo.
Umbuki zindwendwe ngu- Nunzia
Ubukho bubonke ngabanini, ixesha lokungena kunye nokuphuma liguquguquka kakhulu. Izitshixo ziya kuhanjiswa ngaphandle kwesicelo sediphozithi. Ukwamkela iindwendwe ngumgaqo wethu wokuqala, usapho lwethu luchulumancile ukukwamkela ngezandla ezishushu.
Ubukho bubonke ngabanini, ixesha lokungena kunye nokuphuma liguquguquka kakhulu. Izitshixo ziya kuhanjiswa ngaphandle kwesicelo sediphozithi. Ukwamkela iindwendwe ngumgaqo wethu wo…